Xisbiga Madaxweyne Erdogan oo Guul Ka Gaadhey Codayntii Dastuurka Turkiga iyon 17 Isbedel oo Ka Dhacay Dalkaas – Radio Daljir
Abriil 17, 2017 4:59 b 0
Hogaamiyaasha caalamka ayaa madaxweyanaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ugu dambalyeeyay guushii xooganayd ee uu ka gaaray codbixintii aftida ku aaddan in dalkaasi uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u wareego nidaamka Madaxweynaha oo hoggaamiya laanta Fulinta ee dawladda.
Xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa waxaa ay heleen 51.37% halka garabka mucaaradka iyaguna ay heleen boqolkiiba 48.63 guud ahaan codadkii la dhiibtay, labada dhinac oo aad isugu dhawaa ayaa waxaa ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen in qolyaha taageersan ”HAA” ay ku guuleysteen aftida.
Natiijada aftida ayaa ka dhigan in madaxweyne Erdogan uu xafiiska sii joogi doona ilaa iyo sannadka 2029-ka.
AKHRISO ISBEDELADA KA DHACAY TURKIGA
1- Golaha Shacabka tiradooda waa la kordhinayaa, hadda waa 550 xildhibaan, waxaa uu noqonayaa 600 oo xildhibaan.
2. Da’da qofka uu isku soo sharaxi karo hoos ayaa loo dhigay, halkii ay ka aheyd 25 sano waxaa laga dhigayaa 18 sano.
3. Doorashada guud iyo midda madaxweynaha 5-tii sanaba hal maalin ayey wada dhacayaan.
4. Doorashada kadib, Madaxweynaha iyo xisbiga uu ka tirsan yahay xiriirkooda ma go’ayo.
5. Waxaa meesha laga saarayaa jagada ra’isul wasaaraha, oo madaxweynaha ayaa qaadanaya awoodda fulinta.
6. Muddada madaxweynaha waa 5 sano, Labo jeer ka badan lama dooran karo.
7. Murashaxii helo aqlabiyad ayaa ku guuleysanaya madaxtinnimada dalka.
8. Madaxweynaha waxaa uu leeyahay awoodda fulinta, waa hoggaamiyaha ciidanka, waxaa uu sidoo kale magacaabi karaa ama xilka ka qaadi karaa golaha wasiirrada.
9. Madaxweynaha waxaa uu Magacaabayaa hal ku xigeen iyo wax ka badan.
10. Madaxweynaha waxaa uu afti u dirayaa dalka si xeerarka wax ka badal dastuuri ah loogu sameeyo, waa haddii uu u arko muhiim.
11. Waxaa Meesha laga saarayaa dhammaan Maxkamadaha ciidanka.
12. Maxkamada Ciidanka Laga hirgelin karo dalka, marka laga reebo Disciplinary courts.
13. Madaxweynaha waxaa uu awoodaa ku dhawaaqista xaalad degdega ah
14. Madaxweynaha waxaa uu soo saari karaa Digreeto la xiriirta arrimaha fulinta.
15. Baarlamaanka Waxaa Su’aalo Weydiin Karaan Madaxweynaha iyo Wasiirradiisa, madaxweynaha xaq uma laha haddii ay taasi dhacdo in uu doorashooyin degdeg ah ku dhawaaqo.
16. Baarlamaanka waxaa uu soo saari karaa qaraar doorashada la xiriirta haddii shan meelood sadex ay sidaa rabaan.
17. Doorashada guud ee soo socota waxaa ay dhici doontaa November 3, 2019-ka.
Cagabadan iyo Darawalkeeda, Qoys Reerguuraa ah, iyo Ari sii Dhamaanaya!